Tsy fahadisoan'izy ireo izany, fa anao | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 21, 2006 Talata, Aogositra 22, 2006 Douglas Karr
Hitako eo afovoan'ny binge boky indray aho izao, miaraka amin'ny efatra eo amin'ny takelaka misy ahy izao.
Noraisiko Kely no Vaovao lehibe, nataon'i Seth Godin, amin'ity faran'ny herinandro ity. Efa ankafiziko io na dia gaga ahy Andriamatoa Godin. Raha namaky bebe kokoa momba ilay boky aho dia ho tsikaritro fa ny akora dia fitambaran'ny asany… Heveriko fa toy ny mihaino ny 'Greatest Hits', mahafinaritra ny maheno ny hira rehetra… nefa manontany tena ianao hoe maninona ianao no tsy Tsy mihaino fotsiny ireo cd rehetra nanananao teo amin'ny talantalana ianao.
Tamin'ny faran'ny andro dia hadinoko ny zavatra novakiako na henoko tamin'i Andriamatoa Godin. Zavatra iray iaretantsika rehetra io. Ohatrinona amin'ny boky tsirairay no tadidinao? Soa ihany fa mividy «hardcovers» aho satria matetika mandray boky taloha ary mizaha azy ireo raha te hahazo aingam-panahy sy hevitra. Iray amin'ireo boky ireo. Raha raisiko fotsiny ity boky ity ary vakiako ny andalana hoteneniko, dia ho 10 heny ny vola naloako.
Andriamatoa Godin dia mpanoratra manana talenta mahavariana - matetika mametraka ny toe-javatra sarotra indrindra amin'ny teny tsotra azonao atao. Tsy betsaka amin'ny mpanoratra hafa no manome aingam-panahy ny fomba fanaony. Ary azoko antoka fa tsy betsaka ny mpanoratra hafa manana an'ity manaraka ity toa an'Andriamatoa Godin. Ny famakiny dia tsy milaza aminao hoe ratsy na marina izay ataonao, mametraka fanontaniana tsotra fotsiny izy ary milaza ireo zavatra mahatonga anao hiatrika ny toe-javatra misy anao.
Ao amin'ny pejy faha-15, hoy i Seth:
Raha tsy mihaino ny mpihaino kendrenao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Mety tsy ho goavana be izany Wow, saingy marina izany. Ny fanambarana dia azo ovaina ho toerana maro samihafa:
Raha tsy afaka mampiasa ilay rindrambaiko ny mpanjifanao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mividy ilay vokatra ny vinavinanao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mitsidika ny tranonkalanao izy ireo dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mihaino ny mpiasanao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mihaino ny sefonao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mandeha ny fangatahanao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mihaino ny vadinao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Raha tsy mihaino ny zanakao dia tsy azy ireo fa anao izany.
Raha tsy faly ianao dia tsy azy ireo izany fa anao.
Heveriko fa ny teboka dia, inona ireo ianao hanao an'izany? Mitohy i Seth:
Raha tsy mandeha ny tantara iray dia ovao ny zavatra ataonao fa tsy amin'ny fomba mafy iantsoanao (na fimonomonona).
Ovao ny zavatra ataonao. Manan-kery hiova ianao. Ny fanovana dia tsy midika hoe mila manao izany irery ianao. Mangataha fanampiana raha ilainao izany.
Tsy Ezahana hahagaga ny olona